हराउदैं लिङ्गे पिङ्ग (फोटो फिचर)- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
हराउदैं लिङ्गे पिङ्ग (फोटो फिचर)
आश्विन १३, २०७४ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — वडा दशैंको रौनक बढाउने लिङ्गे पिङ्ग विस्तारै हराउदै गएकोछ । ८/१० वर्ष अघिसम्म दशैंको घटस्थापनादेखि नै गाउ टोलमा रोटे र लिङ्गे पिङ्ग हालेर गाउले रमाउने गर्थे । तर आजभोली निक्कै कम भएकोछ । रोटे पिङ्ग त देख्नै छाडिएकोछ । कही कही लिङ्गे पिङ्ग मात्रै देखिन्छ ।
दशैंसंग धार्मिक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध बोकेको लिङ्गे पिङ्ग जिल्लाका थारै ठाउँमा मात्र देख्न सकिन्छ । यस बर्ष जिल्ला भरि ६/७ ठाउँमा मात्र लिङ्गे पिङ्ग राखिएको छ । चचहुई गर्दै पिङ्गमा मच्चिनुको छुट्टै आनन्द आउछ कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ६ वर्मेली टोलमा भोजराज खनालले भने आजभोली यी कुरा ईतिहास बन्न थालेकोछ । हाम्रो संस्कृति विर्सदै छौं उनले भने भावी पुस्ताकालागि यो पुस्तकमा समिति हुदैछ ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७४ १६:३०
आश्विन १३, २०७४ हरिहरसिंह राठौर
धादिङ — धुनिवेशी नगरपालीको वडा नं. ९ त्रिभुवन राजपथबाट करिव ३० मिटर तल अधेरी खोला नजिकै हत्या गरी फालेको अवस्थामा एक युवतीको शव भेला परेको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान पछि उक्त शव विराटनर महानगरपालीका–५ , प्रसन्न टोल बस्ने ललिता रामको भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय महिला विन्दा केसी विहीवार दिउसो घाँस काट्ने क्रममा शवको अस्थिपञ्जर मात्रको अवस्थामा देखे पछि प्रहरीलाई खवर गरेका थिए ।
प्रहरीले घटनास्थलमा एक थान पस चपल,बसको टिकट र स्टाप नर्सको प्रवेश पत्र भेटे पछि ललिता रामको परिचय खुलेको हो ।
शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरि फालेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको र थप अनुसन्धान पछि खुल्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक जीवन निरौलाले बताए ।